IGAD Maxay ii Tahay? Qalinkii:Prof. Maxamed Siciid Gees |
IGAD Maxay ii Tahay? Qalinkii:Prof. Maxamed Siciid Gees
Wax-is-bidayaashii (Elites) bulshadu waxay ku foogan yihiin loollan kursi iyo hadal ma-dhalays ah iyo xafladu lagu qabto huteellada qaaliga ah, dabadeedna Maxaysatadu Tv-yada ay ka daawadaan cuntada la isla dhacayo! Marba Xisbi iyo Urur ayaa loo dayaamayaa, kii shalay Muxaafidka ahaa oo Mucaarid ah iyo Mucaaridka ahaa oo Muxaafid noqday. Habeenkaas dheer ayaa lagu jiraa, dharaartuna waxba ma soo waddo.
Warbaahinta gudaha waxa ayaamahan buuxiyey warar ku saabsan Urur-gobolleedka IGAD iyo War-murtiyeedkii ka soo baxay Shir-madaxeedkii ka dhacay Muqdisho oo Madax badan oo reer Somaliland oo uu ka mid yahay Madaxweynuhu, Haybadle Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa ka dareen-celiyey War-murtiyaadkaas.
Haddaba, shirka lagu qabtay Muqdisho kama soo wada qaybgelin wafuuddii la filayey oo uu ka mid Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaciil Cumar Geelle sida warbaahintu sheegtay diyaaraddiisii ayaa iyada oo Muqdisho ku dhaw cilad farsmo gashay, dabadeedna ay Djibouti ku noqotay. Allaahu run, inkasta oo Muqdishu iyo Nairobi uga dhowaayeen, Djibouti haddana sidaas ayuu uga baaqday Shir-madaxeedka IGAD,
Madaxweynaha Sudan Cumar Bashiir waa ka cudurdaartay imaatinka shirka oo waxay tidhaahdaa Carabtu “Al-qaa’ib Lahu xujatuhu,” oo Af-soomaali ku noqonaysa; “Ka maqani warkiisa leh.” Waxa la sheegayaa inuu ka cabsaday shirqool loogu gacangelinayo Maxkamadda Khawaajiyaasha ee raadinaysa, halka aannu kaba iman Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki shirarka IGAD.
Shirka waxa ka qaybgalay shirkii, Uhuru Kenyata (Kenya), Museveni (Uganda) Iyo Haiel Mariam (Ethiopia) iyo Xasan Culusow (Somalia) oo marti loo ahaa. Saddex Madaxweyne oo mesiixi ah, halka labadii Madaxweyne ee Muslimka ahaa waa ka yabaaleen Shir-madaxeedka IGAD ee Muqdisho.
Haddaba, sannadihii kontomeeyada ee qarnigii labaatanaad (1950…) waxa caan ahaa hadalhays kaftan ku bilaabmay oo ahaa “Khayro maxay noo tahay?”
Khayro waxay ahayd Islaan lahayd Marfash lagu qayilo oo deganayd Berbera. Khayro waxay fadhiisan jirtay iridda Marfashka oo laydh qaboobi ka soo dhacdo, ninkii Marfashka fadhiistaana waxa uu siin jiray laamo jaad ah oo caado noqotay.
Oday jaajaale ah ayaa maalintii dambe la dhaafay laantii jaadka ahayd, markii lagu waada qayshay ayuu yidhi; “Khayro Marfashka halka ugu qabaw ayey fadhiisataa, falaasta shaaha ugu fiicana way qaadataa, jaad bilaash ahna waa la siiyaa…. ee maxay noo tahay Khayro?” halkaas ayuu ku baxay hadalhaysku. Haddaba aan soo xiganee “IGAD maxay noo tahay?”
Dhulgariir Xoog Leh Oo Ku Dhuftay Xeebta Aegean Ee Turkiga
Daawo :-Hogaamiye Xirsi Iyo Wasiiro Ka Tirsan Xukamada Mdaxweyne Biixi…
Somaliland oo billad siisay duuliyihii diiday inuu duqeeyo Hargeysa